यस्ता छन् फिल्म ‘रणवीर’ को छायांकनका दृश्य, अब कति छ छायांकन हुन बाँकि ? (फोटोफिचर) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentयस्ता छन् फिल्म ‘रणवीर’ को छायांकनका दृश्य, अब कति छ छायांकन हुन बाँकि ? (फोटोफिचर)
फिल्म ‘रणवीर’को छायाँकन यतिबेला धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका सुदुरपस्चिमको रमणीय स्थलमा भईरहेको छ । एक्सन, सस्पेन्स र थ्रिलर मिश्रित फिल्मको झन्डै ६५ दिनको छायाँकन उपत्यकामा सकिएपछि निर्माण युनिट त्यहाँ पुगेको हो ।
झन्डै तीन हप्ते सेड्युल लिएर त्यहाँ पुगेको युनिटले केहि दृश्य र दुई गीतको छायाँकन गर्ने निर्माण युनिटले जनाएका छन् । निर्माण घोषणामै महँगो बजेट भनेको फिल्मलाई विना सम्झौता छायाँकन गरिरहेको युनिटको भनाइ छ । फिल्मले महेन्द्रनगरको छायाँकन लगभग सकाएको छ भने धनगढी, घोडाघोडी ताललगायतका रमणीय स्थलमा छायाँकन अझै बाँकि छ । फिल्मका कलाकार सुशील सिटौला, सुपुष्पा भट्ट, हरिहर शर्मा, जगदीश रिजाललगायतको छायाँकन भईरहेको छ ।
शिक्षित युवाले समाजमा गर्ने संघर्षको कथालाई लिएर बनिरहेको फिल्मलाई गोविन्दसिंह भण्डारीले निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्म ‘गाँजा बाजा’ प्रोड्युसर दिपेन्द्र रेग्मी र गोमा विष्टले संयुक्त रुपमा ‘रणवीर’ निर्माण गरिरहेका छन् । फिल्ममा प्रशान्त ताम्राकार, सुशील सिटौला, सुपुष्पा भट्ट, टिका पहाडी, रवी गिरी, नरेश पौडेल, हरिहर शर्मा, भोलाराज सापकोटा, जीवन भट्टराई, जगदिश रिजाल, बसन्ती भट्ट र शैलेश्वरी सिंहलगायतको अभिनय रहेको छ ।
यसै फिल्म मार्फत मोडलिङ क्षेत्रको चर्चित नाम शुभेच्छा खड्का फिल्ममा डेब्यु गर्दै्छिन । महेश पौडेलको छायाँकन रहने फिल्ममा चन्द्र पन्तको द्वन्द, हर्कुलस बस्नेत, सुशान्त गौतम र अमित श्रेष्ठको संगीत रहनेछ । गम्भिर विष्ट र सुरेन बसेलले कोरियोग्राफी गर्नेछन् । फिल्म युनिटले छायाँकन सेटबाट केहि तस्वीर पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
दिपेन्द्र रेग्मीले भने ‘फिल्मको छायाँकनको लागि हामी युनिट सहित महेन्द्रनगरमा छौ । हामी शुक्रबार देखि धनगढी तथा आसपासका क्षेत्रमा छायाँकन गर्नेछौ । फिल्मलाई राम्रो बनाउ कहिँ कतै सम्झौता गरेका छैनौं । फिल्मको दृश्यसहित दुई गीतको छायाँकन यहिँ गरेका छौ । फिल्ममा युवाको सघर्ष र उसको भोगाईलाई चित्रण गरेका छौ । यसमा एक्सन, ड्रामा, रोमान्स सबैको मिश्रण दर्शकले पाउनु हुनेछ ।’